Izindaba - I-NEWGENE Ithola Ukuvunywa Kokuzihlola eBelgium naseSweden
I-NEWGENE Ithola Ukuvunyelwa Kokuzihlola eBelgium naseSweden
I-COVID-19 Antigen Detection Kit ithole imvume yokuzihlola eMnyangweni Wezempilo waseBelgium (FAMHP) naseSweden Medical Products Agency (IsiSweden Medical Products Agency). I-NEWGENE yinkampani yokuqala yaseChina ukuthola imvume yokuzihlola kulawa mazwe amabili ase-Europe, elandela iDenmark neCzech Republic lapho i-NEWGENE ithole khona imvume yokuzihlola phambilini.
I-NEWGENE COVID-19 Antigen Detection Kit (ukuzihlola) inobuhlakani obukhulu futhi icacisiwe. Umphumela wokuhlolwa ungafundwa emaminithini ayi-15 ngokusebenza okulula, okulungele abantu ngaphandle kokuqondiswa nokuqeqeshwa ngobungcweti. I-NEWGENE COVID-19 Antigen Detection Kit (self-test) ilungele ukuhlolwa ekhaya ngabantu, okuthatha isikhathi esincane uma kuqhathaniswa nokuhlolwa kwe-PCR. Umkhiqizo wokuzihlola we-NEWGENE unganciphisa kakhulu ingcindezi ezibhedlela nasezikhungweni zemitholampilo.
IBelgium neSweden zombili zinabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-10, futhi amazwe athinteke kabi yi-COVID-19 eYurophu. I-NEWGENE izoqhubeka nokuhlinzeka ngemikhiqizo ephakeme yokuthola futhi isize ekuvikeleni nasekulawuleni ubhadane kula mazwe amabili.